Netrunner 19.01 Blackbird Yakaburitswa zviri pamutemo NeNew Rima Dingindira | Linux Vakapindwa muropa
Netrunner 19.01 Blackbird Yakaburitswa zviri pamutemo NeNew Rima theme
Dare rekuvandudza riri kumashure kweNetrunner nhasi razivisa iyo Netrunner 19.01 kuwanikwa, kugoverwa kwakavakirwa paDebian.
Iine zita rekuti Blackbird, Netrunner 19.01 anouya mwedzi gumi mushure meNetrunner 18.03 Idhoni iine nyowani nyowani ye3dima yakasviba theme yakagadzirirwa kushandisa iyo Kvantum theme injini uye iyo Alpha-Nhema Plasma theme. Dingindira idzva rinouya nekamwe bling, tinogona kuona mwenje mushoma mune sarudzo "Minimize windows ese uye uratidze desktop".
"Panguva ino yegore, tinofunga kuti tinogona kuyedza chimwe chinhu chakajeka uye chine mavara. Panzvimbo pekutanga 'kutaridzika kwezvinhu', takafunga kuti tinogona kuita chimwe chakasiyana. Blackbird inouya netsiva nyowani inonzi Netrunner Nhema iyo yakasviba, asi isiri yemaziso inopesana.".
Pamusoro peiyo nyowani dhizaini, Netrunner 19.01 inouya nerutsigiro rweWebhu Apps, izvo zvinongedzo kumasaiti ayo anogona kuwedzerwa seanotangisa mumenu yekushandisa. Plasma kusangana pamwe neFirefox, iyo inogonesa kutonga uye kuona zvinoonekwa zvekutora, pamwe nePlasma kusangana pamwe neGTK + zvinoshandiswa.
Izvo zvakagadziridzwa zvikamu muNetrunner 19.01 Blackbird inosanganisira iyo KDE Plasma 5.14.3 graphical nharaunda, inofambidzana ne KDE Mirafu 5.51 uye KDE Zvishandiso 18.08, Qt 5.11.3 Mozilla Firefox 64.0, Mozilla Thunderbird 60.3, pamwe neKrita 4.1.1 software yedhijitari.
Mukati meiyo hood tinowana Linux Kernel 4.19.0. Chekupedzisira, kuburitswa uku kunobatanidza ese KCM interface module uye tweaks pasi pePlasma Tweaks chikamu chinowanikwa mubarutivi. Unogona kudhawunirodha Netrunner 19.01 Blackbird kubva iyi link
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Netrunner 19.01 Blackbird Yakaburitswa zviri pamutemo NeNew Rima theme
DYSMANTLE: zita idzva rakaburitswa kuti uchafarira ...
GTK + 3 iri kuyedza iyo yakagadziriswa theme